चीन राम्रो गुणवत्ता ट्याटू पेन किट बिना एल्युमिनियम केस TZ-008 निर्माण र कारखाना MOLONG
१) ट्याटू पेन मेशीन १pcs
२) पावर सप्लाई १ पीसीएस
)) खुट्टा स्विच १ पीसीएस
)) LBB कार्ट्रिजेस सुई p०pcs (प्रत्येकको लागि १० pcs) rrl, rrl, mm1,7m1
१. तपाईका हातहरू ठूलो बनाउनुहोस्। ट्याटु बन्दूकहरूको पूर्ण ध्यान दिएर उपचार गर्नु आवश्यक छ। यी मेशिनहरू ह्यान्डल गर्नु अघि सावधानी अपनाउनुहोस्। एन्टिब्याक्टेरियल साबुनले तपाईंको हात धुनुहोस् वा ल्याटेक्स ग्लोभ्स लगाउनुहोस्।
२. बन्दुकको साथ आफूलाई परिचित गर्नुहोस्। फ्रेमले सबै टुक्रालाई सँगै समाहित गर्दछ। त्यसो भए तपाईसँग दुईवटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कुण्डल छन् जसले मेशिनको लागि शक्ति प्रदान गर्दछ। कुण्डलीहरूले छिट्टै आर्मेचर बारलाई सार्दछ, जुन एक प्रतिबन्धित सुईसँग जोडिएको छ। विद्युत आपूर्ति विद्युत चुम्बकीय कोइल्डमा जोड्दछ। यी सबै कम्पोनेन्टहरू हटाउन वा आवश्यक रूपमा बदल्न सकिन्छ।
The. ब्यारेल जम्मा गर्नुहोस्। बन्दुकको पकड निरीक्षण गर्नुहोस्। त्यहाँ ट्यूब र बन्दूकको टिप को लागी पकड को दुई पक्षहरु छन्। यसलाई प्राथमिक लम्बाइमा सेट गर्नुहोस्, र दुई स्क्रूहरू समात्नुहोस्। औसतमा सुई टिप २ मिलिमिटर भन्दा बढि र १ मिमी भन्दा कम हुनु हुँदैन। यदि त्यहाँ अत्यधिक रगत छ भने, त्यसपछि तपाइँको सुई धेरै लामो छ।
The. सुई सेट अप गर्नुहोस्। तपाईंले किटको साथ प्राप्त गर्नुभएको सुईहरूमा एक नजर लिनुहोस्। तपाईंसँग सुईको केहि फरक आकारहरू हुनुपर्दछ। टिपको तर्फ ट्यूबको माध्यमबाट घुसाएर सुईहरू मध्ये एउटा स्थापना गर्नुहोस्। सावधान हुनुहोस् स as्ग्रहण गर्दा सुईलाई नलगाउन।
The. निप्पल सुरक्षित गर्नुहोस्। निप्पल, जसलाई ग्रुमेट पनि भनिन्छ, बन्दुकको आधारमा सुई र पकड सुरक्षित गर्दछ। आर्मेचर बार पिनमा निप्पल राख्नुहोस्। निप्पलमा सुईको टोकरी टुक्रिनुहोस्।
6. सुई समायोजित गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले पकड भेला गर्नुभयो, तपाईंले कति सियो पर्दाफास भयो त्यसको लम्बाइ समायोजन गर्न आवश्यक छ। तपाईं ट्यूब vise समायोजन गरेर सुईको जोखिम समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। ट्यूब vise आर्मेचर र सुईको बीचमा समायोज्य पेंच हो।
अघिल्लो: पारदर्शक सुझावहरूको साथ कालो सिलिकॉन पातलो धागा डिस्पोजेबल ट्याटु ग्रिप
अर्को: ट्यापू सुईहरूको लागि ग्रिप रोक्नुहोस् पारदर्शी लामो डिस्पोजेबल ट्याटु टिप्स
शुरुआती टैटू किट्स
कुण्डल ट्याटू मेशिन किट
डिस्पोजेबल इयर छेड्ने किट
कलम टैटू मेशिन किट
स्थायी ट्याटु मशीन पेन किट
छेड्ने उपकरण किट
प्रोफेशनल टैटू गन किट
प्रोफेशनल टैटू किट्स
पेशेवर ट्याटु मेशिन किट
रोटरी पेन ट्याटू मेशिन किट
ट्याटु उपकरण किट
ट्याटू गन किट
ट्याटू मेशिन पेन किट
ट्याटु मेशिन पेशेवर किट
ट्याटु मेशिन किट
ताररहित ट्याटू मेशिन किट
शेल ट्याटू रोटरी मेशीन
क्याथेटर शरीर छेड्ने सुई छेड्ने आपूर्ति
पाँच-पोइन्ड तारा round 360 round राउन्ड ट्याटु पेडल
हमिंगबर्ड डिस्पोजेबल ट्याटु ट्युब्स २MM एमएम